jeudi, 13 septembre 2018 13:10
Sambava: Vary simba 300 gony nodorana
Mbola ilay tranombarotra iray nahatrarana entana simba tamin’ny 1 septramba 2018 teo ihany no nahitana azy ireo. Naneho fahendrena anefa ny tompiny ka nampandre ny Talem-paritry ny varotra SAVA, BE Christophe ny fisian’io.
Nandray fepetra avy hatrany ity farany, ka nalaina, nopotehina ivelan’ny tanàna ireo vary ireo nisorohana ny fahasalamam-bahoaka.
Mbola manentana ny rehetra ny Talem-paritry ny varotra SAVA hampilaza sy hampahafantatra raha mahita entana na sakafo efa simba handraisana fepetra.
jeudi, 13 septembre 2018 12:57
Kitra - COSAFA Cup 2018 (vehivavy) : Resin’i Afrika Atsimo 2 noho 1 i Madagasikara
Niondrika an’isa 2 noho 1 nanoloana an’i Afrika Atsimo ny solontena Malagasy, tamin’ny lalao voalohany natrehiny amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika Atsinanana amin’ny baolina kitra, sokajy vehivavy na COSAFA Cup 2018 (vehivavy), izay tanterahina ao Port Elizabeth, Afrika Atsimo.
Voafidy ho mpilalao nisongadina nandritra ny lalao, na izany aza, ny mpiandry haraton’ny Barea, Andrianandrasana Verosantatra Diana.
Miisa 12 ny ekipam-pirenena mifaninana amin’ity COSAFA Cup 2018 ity, handimby toerana an’i Afrika Atsimo tompondaka farany. Mitsinjara amina vondrona telo izy ireo, ka ao amin’ny Vondrona A no misy an’i Afrika Atsimo, Botswana, Madagasikara ary Malawi.
jeudi, 13 septembre 2018 12:33
Faritra SAVA: Raikitra ny “Opération Mandio”
Haharitra iray volana ity “Opération MANDIO” ity. Nambara omaly tetsy amin’ny tobiny Zandarimariam-pirenena Sambava ny fanombohan’ny hetsika.
Ny tanjona lehibe dia hampandry fahalemana ny tany satria izahay hoy ny komandin’ny Groupement SAVA, Colonel BESOA Sirnot dia tompon’andraikitra amin’izany ary ny vaindohan-draharaha aty SAVA dia ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana momba ny lavanila, ary ny ady amin’ny famotsiana omby halatra.
Na izany aza ny fitandroana ny fandriampahalemana dia tsy misy fetra, hoy ity tompon’andraikitra ity.
jeudi, 13 septembre 2018 12:30
Toamasina: Zanaka mpitandro filaminana, sarona tamina fanafihana mitam-piadiana
Roalahy no voasambotra. Mpanafika mpivarotra fahana sy mpanao “Mobile Money” izy roa lahy ireo. Efa nanaovan’ny Zandary ny fanarahan-dia noho ny fitarainana maro voarain’ny Zandary izy roa lahy, fa izao vao tratra.
Mbola tratra teny amin’izy roa lahy ny fahana sy “carte Bip” avy nangalarin’izy ireo. Ny moto fitondran’izy ireo manafika ihany koa fantatra tamin’ny taratasin’ny moto fa avy nangalarina.
Fantatra tao anatin’ny famotorana azy ireo fa zanaka mpitandro filaminana ny iray amin’izy ireo. Anio no voalaza fa hiakatra fitsarana ny raharaha.
jeudi, 13 septembre 2018 08:48
Lisi-pifidianana: Niampy ireo nodidian’ny Fitsarana fa hampidirina
Na efa nikatona tamin’ny 15 mey 2018 aza ny lisi-pifidianana hampiasaina amin’ny fifidianana ho avy, dia mbola nisisika ireo mpifidy hadino, ka nanao fitarainana teny amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany ary nahazo « ordonnance ».
Nisy 23 159 izy ireo no nodidian’ny Fitsarana, ho fampiharana ny Didy hitsivolana 2008-008 tamin’ny 11 mey 2018, hampidirina anaty lisi-pifidianana.
Rehefa natao ny fanadiovana ireo anarana niverimberina tao anaty lisi-pifidianana dia 10 280 no niampy tamin’ny isan’ny mpifidy, ka lasa 9 913 599 no voasoratra ao anaty lisi-pifidianana.
jeudi, 13 septembre 2018 08:45
CENI: Miitatra ny mpikambana
Hivory voalohany anio 13 septambra, ny « CENI élargi », izany hoe miampy ny solonten’ireo kandida filoham-pirenena ireo mpikambana 7 ao amin’ny CENI foibe. Manana solontena iray avy ho mpikambana vonjimaika ao ny kandida miisa 36.
Tsipy kanetibe: Tonga any Canada ny solontena Malagasy
Tonga soa, omaly, any Desbiens any Canada ihany ireo solontena Malagasy hiatrika ny andiany faha-48 amin’ny fiadiana ny Tompondaka erantany amin’ny taranja tsipy kanetibe olontelo miaraka sy “tirs de précision”, izay hanomboka amin’ity anio ity ary haharitra hatramin’ny 16 septambra ho avy izao.
Misy firenena Afrikana miisa 10 no mandray anjara, nanana olana tamin’ny “visa” avokoa ireo mpilalao avy amin’ireo firenena ireo, anisan’izany ny antsika Malagasy, afa-tsy ny an’i Maroc.
Razafindrainony Beryl Lala Marie no lehiben'ny delegasiona Malagasy, Andriambelosoa Heritiana no mpanazatra. Ny mpilalao kosa dia misy an’i Razafimahatratra Herilantosoa, Rajaobelina Radotiana, Rajaonarison Irénée Marie Victor, Rakotoninosy Taratra
jeudi, 13 septembre 2018 08:40
Journée Mondiale des programmeurs et développeurs.